Iguma filno kaliya in la ii salaaxo Naaska, waxaan rabaa wax ka badan? - Hablaha Media Network
Iguma filno kaliya in la ii salaaxo Naaska, waxaan rabaa wax ka badan?
Home » galmada
HMN:- Umad walba waxa ay leedahay caado iyo dhaqan u gaar ah ayadoona taa ay tahay awood Eebe uu ku maneystay bulshooyinkasi, waana mid keentay in maqaalo iyo bayaan laga sameeyo wacyiga Galmada saxda ah ee u dhaxeeya labada dhinac ee doonaya in ay isu tagaan.
Muuqaaladaasi ayaa ah mid inta badan dadka isqaba
aysan ku qanacsaneen ayadoona qaabab iyo muuqaalo
kaa yaabiya aad ku arkeyo mararka qaar ayadoo lagu
soo daabacayo jaraa’idyada.
Awoodda dareenka macaansi waxa uu ku xiran yahay
sida ay isu haystaan labada isu galmoonaya iyo
dhaqdhaqaaqooda xilliga ay galmadu dhacayso, taasi
oo iyana ku xiran hadba aqoonta ay u leeyihiin
Waxa jirtay in aqoon yahan hore uu yiri: (Macaanta
galmadu ma waarto haddii loo joogteeyo hal qaab, oo
aan lagu beddelin qaabab kale).
Ka hortagga dhibaatooyinka iyo dhaawacyada
caafimaad darrida keena.
Dhibaatooyinkaasi oo sigaar ah khatar ugu ah haweeneyda uurka leh iyo ilmaha caloosheeda ku jira labadaba.
Dhibaatooyinka caynkaasi ah waxa looga hortegi karaa in la isugu galmoodo qaabka
ku habboon. marxalad kastaXakamaynta uurka. Waxa la hubiyey in qaab kasta o0kordhiya macaanta xilliga galmadu uu sidoo kale kordhiyo suuragalnimada uur­qaadista.
Qaabka fududeeya in biyaha lagu tuuro gudaha hoose ee cambarku, waxa uu fududeeyaa inay xawadu u gudubto ilma­galeenka. Ha yeeshee fursadda uur­qaadistu waxay yaraataa kolka la isticmaalo qaab keena inay xawadu dibadda u soo baxdo.